Beesha Caalamka oo war ka soo saartay doorashooyinka | KEYDMEDIA ENGLISH
Beesha Caalamka oo war ka soo saartay doorashooyinka
War murtiyeed ay si wadajir ah u soo saareen saaxiibada beesha Caalamka ee Soomaaliya ayaa madaxda dalka ugu baaqay in waqtigii loogu talagalay lagu soo gabagabeeyo geeddi-socodka doorashada.
MUQDISHO, Soomaaliya – Wakiillada beesha caalamka ee ku sugan Caasimadda, ayaa war-muriyeed wadajir ah, ka soo saaray geedi-socodka doorashooyinka, oo hal isbuuc ka harsan yahay waqtigii kama danbeysta ahaa ee loo qabtay in la soo af-meero.
Waxa ay bogaadiyeen doorashada kuraasta Golaha Shacabka ay qiyaastii ​​kala bar qabsoontay, hayeeshee, waxa ay soo jeediyeen in la saxo khaladaadka jira ee wali muuqda, kaas oo ilaa hadda hor taagan qabashada doorashada qaar ka mid ah kuraasta.
“Saaxiibada caalamku waxay mar kale hoosta ka xarriiqayaan baahida loo qabo in sixidda qaladaadka habraaca loo wajaho si dhexdhexaad ah oo daah-furan si loo dhiso kalsoonida geeddi-socodka doorashada iyo natiijadeedaba”, ayaa lagu yiri war ka soo baxay UNSOM.
Waxa ay soo jeediyeen in musharrixiintu xor u ahaadaan baratanka caqabad la'aan, Suxufiyiintuna awood u yeeshaan inay tebiyaan doorashada, bulshada rayidka ahna ay si xor ah u kormeeraan hawlaha socda cabsi gelin la’aan.
Waxa ay ku baaqeen in dhammaan madaxdu ka fogaadaan sii baahidda xiisadda siyaasadeed, lana xaqiijiyo in ciidamada ammaanka aan loo isticmaalin sidii qalab siyaasadeed, xilli Fahad iyo Farmaajo, wali ciidan ku sii daabulayaan Baldweyen.
Sida ku cad War-murtiyeedka Golaha Wadatashiga Qaranka (GWQ) ee bishii Janaayo, wakiillada Beesha Caalamku, waxa ay hoosta ka xariiqeen in geeddi-socodka doorashadu ku egyahay 25 Feberaayo, lana dardargaliyo xilligaan si loo xaqiijiyo xilliga jadwalka.
“Maadaama wakhtiga kama dambeysta ah ee ay isku raaceen Golaha Waatshiga Qaran bishii Jannaayo 2022 uu ku eg yahay 25 Feberaayo, bah-wadaagtu waxa ay dhiirigelinayaan sii wadidda dardargelinta, si loo xaqiijiyo dhammaystir degdeg ah, laguna kalsoonaan karo ee geeddi-socodka doorashada”, ayaa lagu yiri.
Ku dhawaad 60% kuraasta Golaha Shacabka ayaa la doortay, xilli hore loo soo af-meeray doorashada Aqalka sare, Magaalooyinka Gaalkacyo iyo Baladweyne, ayaa la filayaa in maalmaha soo socda lagu doorto kuraas hor leh.